Sida Loo Cusbooneysiyo Qoraaladii Hore ee Blog-ga Si Looga Dhigo Mawduucaga Cusub | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Sida loo cusboonaysiiyo Qoraaladii hore ee Blog si nuxurkaagu u ahaado mid cusub
Sida loo cusboonaysiiyo Qoraaladii hore ee Blog si nuxurkaagu u ahaado mid cusub
0 Daqiiqado 14 ayaa akhriyay
Kaliya waxaan doonayaa inaan tan halkaas ku tuuro: la macaamilka waxyaabaha duugga ah ee ku yaal boggaaga waxay leedahay wax badan oo ay wadaagaan nadiifinta khaanadda sharabaadadaada intii aad u malayn lahayd.
Haa, sharabaadada I maqal.
Qofna weligii ma rabo inuu nadiifiyo khaanadda sharabaadada, oo intaad dib u dhigayso, sharabaadada duqoobay ee daloolka fuushan, urayaan ayaa isa soo taraya, iyagoo qaadanaya hanti ma guurto ah oo qaali ah. Marka ay urayaasadu qaataan meelo badan, way sii adkaanaysaa in la helo sharabaadyo cusub oo cusub oo aad dhab ahaantii rabto inaad xidhato.
Marka aad taariikhaysan wax ku soo ururinayso mareegahaaga, sida ugu fudud uma aha dadka inay helaan qoraallada cusub ee aad doonayso inaad soo bandhigto. Sida wax yar oo kale Nadiifinta guga jid dheer ayuu maraa waxaad u baahan doontaa inaad sidaas oo kale u sameyso mareegahaaga. Ma aha hawl aad u xun sidaad filayso, faa'iidooyinkuna waa toban laab.
Waxaad horey u qabatay shaqada adag ee bilawga bloggaaga. Hadda baro sababta ay tahay inaad u ilaaliso macluumaadkaaga cusub - iyo waxa lagu sameeyo qoraalladaas hore.
Runtii Ma U Bahanahay Inaan Maro Qoraalkii Hore?
Jawaabtu waa "haa" weyn. Blogging-ku maaha hawl-dejin-oo-ilaa-hawleed!
Kathryn Marr, oo ah aasaasaha suuqgeynta dhijitaalka ah iyo shirkadda horumarinta webka, ayaa tiri: "Blooggaagu waa muraayadda shirkaddaada," Hal-abuurka Buluugga Maroodiga. "Waxay muujinaysaa inaad aqoon u leedahay warshadahaaga, waxay ku siinaysaa macluumaad qiimo leh oo ilaalinaya macaamiisha suurtagalka ah ee xiisaha leh, waana mid ka mid ah furayaasha istiraatiijiyadda Horumarinta Mashiinka Raadinta (SEO). Markaa haddii aanad in muddo ah soo dhejin iyo haddii nuxurkaagu uu yahay mid duug ah ama khalad ah, markaa kama faa'iidaysanaysid qalab aad u qiimo badan. Waxaa dheer, iyadoo ku xiran goobtaada, waxay keeni kartaa hoos u dhaca qiimeynta mashiinka raadinta iyo deymaha suurtagalka ah."
Bal qiyaas haddii qof helo goobtaada oo uu gujiyo qoraal hore oo ay ka buuxaan macluumaad duugoobay ama, xitaa ka sii daran, khaladaadka naxwe ahaaneed. Yeey! Ma u malaynaysaa in booqdegu uu u qaadan doono goobtaada - iyo suurtagalnimada ganacsigaaga - si dhab ah intaas ka dib?
Haddii qof uu arko tirooyin ama tirooyin aan sax ahayn, waxa uu u qaadan karaa in aanad aqoon u lahayn warshadahaaga, ama aanad dan ka lahayn macluumaadka aad u soo bandhigto macaamiisha mustaqbalka.
"Isticmalayaasha internetka si degdeg ah ayey u socdaan," ayuu yiri Phil Weaver, CMO of Guusha Barashada. "Inta badan waxaa laga yaabaa inay ku soo degaan boostada ka timid raadinta raadinta mana ogaan karaan in boostadu aad u da' weyn tahay. Haddii boostadu aanay sax ahayn, tani waxay si xun uga muuqan kartaa shirkadda. Dhibaatadan waa la weynayn karaa haddii boostada ay hesho taraafikada mashiinka raadinta, si tartiib ah u cunaya sumcadda shirkadda. Qoraalada aan saxda ahayn ee hela taraafikada waxay wax u dhimi karaan sawirka shirkadda maskaxda booqdayaasha boggaas. Tani waxay noqon kartaa dhibaato si xun u saamaysa shirkadda muddo dheer, dhaawacday sawirka shirkadda iyada oo aan sababta la ogaan. "
Sabab kale oo lagu cusboonaysiiyo boggaaga si joogto ah waa Qoraaladii hore waxay u xumaan karaan SEO. "Google wuxuu jecel yahay inuu arko taariikh weyn oo ka kooban waxyaabo joogto ah sidaa darteed, siyaabo badan, qoraalada hore ee blog-gu waxay faa'iido u leeyihiin SEO, haddii ay yihiin kuwo tayo sare leh, khuseeya, oo si wanaagsan loo hagaajiyay," Marr ayaa yidhi. "Laakiin, waxaa jira saddex xaaladood oo qoraaladii hore ay ku dhaawaci karaan."
Haddii balooggaga laftiisa uu duq yahay oo aan la cusboonaysiin muddo dheer, Google ayaa arki doonta kuwa-daabacaadda taariikhaha oo ku riixi doona xagga hoose ee natiijooyinka raadinta. Taasi waa sababta cusboonaysiinta qoraaladaas hore iyo qorista kuwa cusub si joogto ah ay fure u tahay.
Qoraaladaadii hore waxaa loo wanaajin lahaa heerarka SEO ee duugoobay ee hadda leh ganaaxyo la xidhiidha. Tusaale ahaan, ka hor 2011, walxaha muhiimka ah - oo ku daraya ereyo badan oo muhiim ah oo ku jira macluumaadkaaga - ayaa lagu dhiirigeliyay, laakiin hadda waa dhaqan xumo waxayna u horseedi kartaa ganaaxyada Google.
Qoraalada hore, waxaa laga yaabaa inaad isku dayday inaad ku darajeyso ereyo fure oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, Google ayaa kaliya soo bandhigi kara qaar badan oo ka mid ah boggagaaga bogga iyo dhejisyada boggaga ugu sarreeya ee mashiinka raadinta, taas oo ka dhigi karta mid aad u adag in aad ku habboon tahay, dhejisyada la beegsanayo si ay u darajo wanaagsan.
Waxaa dheer, cusboonaysiinta nuxurku waa istaraatiijiyad wax ku qorida blog-ka oo aad uga qiimo badan marka loo eego in la abuuro waxyaabo cusub si joogto ah.
Relacionado: Xagga Khubarada: 19 Talooyin Blogging Wacan ee 2019
"Abuuritaanka nuxurku waa kheyraad aad u badan-habka degdega ah," Weaver ayaa yidhi. "Boos kasta oo duug ah waa in loo tixgeliyaa hanti ganacsi. Sida hanti kasta oo ganacsi, jagooyinkii hore waa in la hayaa si loo helo faa'iidada ugu badan ee hantidaas. "
A qalad caadi ah dadku waxay ku fekerayaan inta ay ka kooban yihiin waxay ku hayaan boggooda, way ka sii fiican yihiin, markaa taasi waa sababta aysan u fiirsan qoraallada hore. Laakiin runtu waxay tahay, waa inay had iyo jeer ku saabsan tahay tayada marka loo eego tirada.
"Waxaa jirta khuraafaadkan suuq-geynta nuxurka leh oo sidan u dhacaya: Ku dheji marar badan si aad u hesho taraafig badan," ayay tiri Camilla Hallstrom, lataliyaha suuqgeynta nuxurka Saamayn Ku Leh Waxyaabaha. "Hubaal, blogging-ka oo kale ayaa laga yaabaa inuu shaqeeyay shan sano ka hor, iyo haa, waxaa laga yaabaa inay wali shaqeyso maanta, ilaa xad. Laakiin xeerarka tayada. Dadku waxay aad ugu hawlan yihiin waxyaabo tayo leh, waana habka ugu wanaagsan ee lagu dhiso summada ay jecel yihiin. Ka dib oo dhan, waxaa jira buuq badan oo online ah. Sida kaliya ee lagu soo bixi karaa waa in la abuuro wax mudan in la daryeelo. Taasina waa sababta cusboonaysiinta nuxurku ay aad muhiim ugu tahay. Tayadu waxay qaadataa wakhti, iyo sida kaliya ee lagu hubin karo in dhammaan macluumaadkaagu yahay heerka ugu sarreeya waa in diiradda la saaro barkad yar oo ka kooban."
Bloggaaga wuxuu u qalmaa martigelinta ugu fiican
Dib u cusboonaysiinta tooska ah ee DreamPress iyo difaaca adag ee amniga ayaa ka saaraya maamulka server-ka gacmahaaga si aad diirada u saarto abuurista waxyaabo fiican.
Intee jeer ayaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso waxa ku jira?
Jawaabtu way kala duwanaan kartaa iyadoo loo eegayo nooca blogger ee aad tahay iyo dabeecadda goobtaada, laakiin xeerka wanaagsan ee suulka ayaa ah in la sameeyo dib u eegis dhamaystiran sanadkiiba mar.
"Waxaan kula talinayaa maareeyayaasha nuxurku inay isku dayaan inay dhammaystiraan xisaab hubin buuxda sannadkii, haddii buug-yarahaagu aanu kumanaan maqaallo qoto dheer ahayn," ayuu yidhi Sam Warren, maamulaha suuqgeynta ee RankPay. "Markasta oo uu sii weynaado buug-yarahaagu, waxay u badan tahay inay tahay inaad rabto inaad horumariso habraaca dib-u-cusboonaysiinta beddelka qaadashada hab mashruuc ku salaysan."
Haddii warshadahaagu ay tahay mid tartan, dhaq-dhaqaaq badan, ama si joogto ah u leh halabuuro cusub, markaa waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso nuxurkaaga marar badan si aad naftaada u siiso gees - gaar ahaan warshadaha sida sharciga, maaliyadda, iyo suuq-geynta.
Relacionado: Hagaha Tallaabo-tallaabo ah ee lagu samaynayo Hanti-dhawrka nuxurka boggaaga
"Waa maxay sababtu? Ka fikir sida aad u isticmaasho Google ama makiinadaha kale ee raadinta," Hallstrom ayaa yidhi. "Markaad wax raadiso, waxaad haysataa doorashooyin badan, markaa waxaad u baahan tahay inaad go'aansato cinwaanka aad gujinayso. Waa badan Waxay u badan tahay inaad gujiso wax la daabacay ama la cusboonaysiiyay dhawaan marka loo eego wax la cusbooneysiiyay afar sano ka hor. Haddii aad leedahay cinwaan sida 'The 7 Best Computers (2018 Edition),' taasi aad ayey uga sii xoog badan tahay ciwaanka guud sida '7-da Kombiyuutarada ugu Wanaagsan' sababtoo ah adiga ayay adiga kugu gaar tahay isticmaale ahaan."
Sidoo kale, haddii ay jirto horumar la taaban karo, hal-abuur ama wax la mid ah, Hallstrom waxay soo jeedinaysaa in la cusboonaysiiyo macluumaadkaaga bisha soo socota ama wax ka badan.
Sideed u doorataa qoraalada aad cusboonaysiinayso?
Iyadoo cusboonaysiinta boostada laga yaabo inay kuguula ekaato shaqo badan, ka fikir wakhtiga iyo dadaalka aad horeba u galisay nuxurkaga. Mararka qaarkood dhawr qoraal oo kooban ama sawirro cusub ayaa ah waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad qoraaladii hore uga dhigto mid cusub oo mar kale khuseeya. Waa kan sida loo go'aamiyo kuwa mudan dib u habeynta
"Waxaa laga yaabaa inaad leedahay wax ka badan dhowr baloog oo ku yaal boggaaga, xaaladdaas, macno ma samaynayso inaad cusboonaysiiso dhammaan macluumaadkaaga si joogto ah," ayuu yidhi Hallstrom. "Taas bedelkeeda, hubi falanqayntaada hal mar (ugu yaraan 12 biloodba mar) si aad u aqoonsato waxa ugu sarreeya." Taas macneheedu waxa weeye waxa ku jira taraafig, ka kooban mustaqbalka taraafikada heli kara, iyo nuxurka beddelaya.
Waxaad tan ku hubin kartaa qalabka sida Google Analytics; Hubi inaad ku darto beddelaadyada falanqaynta aad raadinayso. Waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso qoraalada horeba ugu sareeya Google si aad u hubiso inaad ilaaliso booskaaga, dhejisyada ku dhow inay sare u kacaan (maadaama dhawr ka mid ah la cusboonaysiiyay ay kordhin karaan mawqifkooda) iyo dhejisyada mar helay feejignaan badan warbaahinta bulshada - maadaama aysan hadda cusub ahayn oo ay khusayso, lama wadaago mar dambe.
Waqti sii si aad u aragto waxa ku cusub garoonkaaga. War kasta ayaa laga yaabaa inuu mudan yahay in la cusboonaysiiyo macluumaadkaaga si loogu daro. "Kadib, baar tartankaaga," Hallstrom ayaa yidhi. "Miyaa la daabacay wax cusub oo kaa sareeya Google?"
Ma waxaad raadinaysaa tabo u gaar ah dhagaystayaashaada gaarka ah? Waxaan u qornay hagayaal loogu talagalay niches blogging oo kala duwan:
Sida Loo Bilaabo Blog Cunnadaada
Sida Loo Bilaabo Blog-ga Sawir Qaadista
Sida Loo Bilaabo Blog Jimicsi
Hubi cabbirada Isticmaalahaaga
Eeg sida ay dadku ula falgalaan macluumaadkaaga, oo ay ku jiraan inta wakhtiga lagu qaato boggaga, heerka boodhka, heerka gujinta, iyo heerka beddelka. Macluumaadkan waxaa laga heli karaa Google Analytics. Haddii ka qayb qaadashadaadu hooseyso, waxaa jira warar cusub oo aad samayn karto si aad u horumariso. Sidoo kale, hubi faallooyinka isticmaalaha si aad u aragto haddii dadku ay su'aalo ka qabaan macluumaadkaaga - waxaad u baahan doontaa inaad ku darto jawaabaha cusbooneysiintaada. "Waxa kale oo aad isticmaali kartaa cabbirada isticmaalaha si aad u horumariso beddelaaddaada," Hallstrom ayaa yidhi. "Haddii macluumaadkaagu aanu u beddelmin sidii la rabay, cabbirradan ayaa kaa caawin doona inaad fahamto sababta iyo waxa aad samayn karto si aad u horumariso."
Samee Falanqaynta SEO
Hubi in SEO-gaagu uu yahay mid casri ah adoo eegaya falanqaynta ereyga muhiimka ah si loo hubiyo inaad isticmaasho ereyada muhiimka ah ee saxda ah maadaama caadooyinka raadinta isbeddeli karaan waqti ka dib. "Fikirka aad ka hesho cabbirada isticmaalaha ayaa kaa caawin doona inaad go'aansato haddii nuxurkaagu u baahan yahay in lagu hagaajiyo ka qaybgalka," Hallstrom ayaa yidhi. "Xusuusnow, kani waa cabbir muhiim u ah Google! Isticmaal Google Search Console si aad u aragto ereyada muhiimka ah ee dadku isticmaalaan si ay u helaan macluumaadkaaga iyo si aad u hubiso qiimaha gujintaada. Qiyaasahan ayaa tilmaami kara haddii cinwaannada SEO-gaagu u baahan yihiin cusbooneysiin. "
Relacionado: Sida loo kabsado Websaydhkaaga WordPress
Waa maxay Habka ugu Wanaagsan ee lagu Cusbooneysiin karo Qoraalada Hore?
Cusbooneysiin kastaa ma sinna. Qaarkood waxay u baahan doonaan qaadis ka culus kuwa kale, oo isticmaal macluumaadka aad heshay intii lagu jiray cilmi-baaristaada si ay kaaga caawiyaan inaad go'aamiso sida saxda ah ee dib-u-habeyntaasi u ekaan doono.
"Isticmaal fikradaha aad kasbatay si aad u horumariso ciwaankaaga, qoraaladaada, iyo sawirada," Marr ayuu yidhi. "Tusaale ahaan, ma laga yaabaa inay jirto xog cusub oo aad isticmaali karto inaad ku darto garaaf? Cusbooneysii SEO-gaaga oo wanaaji khibradda isticmaale, haddii ay suurtagal tahay. Waxaad doonaysaa in qoraaladaadu ay helaan macluumaad sax ah, lagu hagaajiyo istaraatiijiyad ahaan ereyada muhiimka ah ee gaarka ah, oo ay ku jiraan sawiro khuseeya. Boos kastaa waa inay door ka ciyaartaa istaraatiijiyada suuqgeynta guud, iyo dib u soo celinta iyaga si ay ugu habboonaadaan istiraatiijiyaddaada waxay ka dhigi kartaa xitaa qiimo badan."
Maskaxda ku hay hababkan dib-u-warshadaynta nuxurkii hore:
U rog qoraaladii hore u rog xog-ururin "Isticmaal waxa ku jira iyo tirakoobyada boostada blogkaaga si aad u abuurto qoraal si fudud loo fahmi karo xog muuqaal ah," bunni ayuu yidhi. "Kuwani waxay ku fiican yihiin abuurista taraafikada dabiiciga ah iyada oo loo marayo saamiyada bulshada - gaar ahaan meelaha sida Pinterest - iyo inaad si dhakhso leh u soo bandhigto macluumaadkaaga."
Hel xaqiiqooyin cusub. Cusbooneysii qoraaladii hore macluumaad cusub, sida tirakoobka hadda jira iyo wararka. Ku dar tafaasiisha khuseeya ee laga yaabo in aanay jirin markii boostada asalka ah la sameeyay.
U cusboonaysii bulshada "Haddii ay si fiican ugu fiicnaan lahayd warbaahinta bulshada markaa waxa aan guud ahaan samayno waa in aan eegno boostada oo aan aragno sida aan u hagaajin karno," Weaver ayaa yidhi. "Khayraadka weli ma cusub yihiin? Ma jiraan kuwo kale oo aan ku dari karno? Macluumaad intaas ka badan ma soo shaacbaxday muddadan? Baaqayada ficilku ma wanaagsan yahay? Ma leenahay hogaan adag iyo laad? Waxaan sameyneynaa wax kasta oo aan awoodno si aan u wanaajino maqaalka, ka dibna dib ayaan u dhejineynaa." Ha iloobin inaad mar kale xayeysiiso.
Abuur qoraalada "ugu fiican". Tixgeli kan nooca albamka hits ugu weyn Tani waa hab lagu kala saaro ururinta qoraaladii hore oo laga dhigo inay mar kale dareemaan cusub, waxayna noqon kartaa wax kasta oo ka socda '20ka Talooyin ee Suuqgeynta ugu Sarreysa' ama 'Sida ugu Fiican ee Loo Diyaariyo Boostada Ubaxyada ee 2017.'
Filim muuqaal ah maqaal hore. "Tani waxay runtii si fiican ugu shaqeysaa casharrada, cuntooyinka, iyo noocyada la midka ah ee qoraallada," Marr ayuu yidhi. "Fiiri muuqaal ku dhex socda akhristayaashaada wax aad ku qeexday barta blog-ka. Kadibna, la wadaag akoonnadaada warbaahinta bulshada oo ku dar qoraalkii hore si aad uga qayb qaadato."
Samee isbedel yar. "Haddii ay tahay xog wanaagsan, laakiin ma aysan sameynin si gaar ah, markaa waxaan si dhow u eegeynaa cinwaanka iyo muuqaalka muuqaalka," Weaver ayaa yiri. "Waxay u badan tahay inaan dib u qori doono cinwaanka oo aan bedelno sawirka." Waxaad la yaabi doontaa waxa ay tani ka duwan tahay. Sawirada la qabsan karo, la riixi karo kaliya maaha inay maqaal ka dhigaan mid muuqaal ah - waxay sidoo kale ka dhigaysaa mid aad u badan in lagu wadaago warbaahinta bulshada.
U oggolow qaybo qani ah oo ku yaal balooggaaga. "Kuwani waxay bixiyaan macluumaad dheeraad ah oo ka muuqan doona matoorada raadinta sida dib u eegista, macluumaadka qoraaga, iwm," Marr ayaa yidhi.
Cusbooneysiinta Qoraaladii hore ee Blog si loo horumariyo SEO
Boostada duugga ah ee la cusboonaysiiyay waxay la mid noqon kartaa mid qiimo leh sida boostada cusub. "Joogta joogtada ah, tayada sare leh ayaa muhiim u ah istaraatiijiyad SEO ah oo wanaagsan," Marr ayuu yidhi. "U hagaajinta ereyada muhiimka ah ee gaarka ah, ku darida alt tags sawirada, iyo kordhinta dhererka iyo tayada nuxurka waxay aad u fogaan kartaa samaynta darajadaas. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qoraallada weligood cagaarka ah si aad ugu waddo taraafikada warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta iimaylka. "
Isticmaalka aaladda ereyga muhiimka ah, sida Ahrefs or Buzzsumo, Warren waxa uu ku talinayaa in la eego sida muuqaalka ereyga muhiimka ah uu u beddelay qayb kasta oo ka mid ah nuxurka.
"Waxaa laga yaabaa in ereygaagii asalka ahaa uu lumiyay mug weyn, ama laga yaabee in tartame uu soo galay oo uu abuuray wax xitaa ka sii fiican qaybtaada asalka ah," ayuu yidhi. "Wax kasta oo sababtu tahay, inta badan waxay noqon doontaa mid u qalanta dadaalka lagu ogaanayo ereyada muhiimka ah ee ugu rajo-gelinta badan ee nuxurkii hore u darajeyn karo oo ka dibna raaci karo."
Siyaabaha kale ee kor loogu qaado SEO ayaa kordhinaya dhererka boostada, ku darida sharraxaadda meta ee la hagaajiyay iyo cinwaannada, ka fogaanshaha dhaqamada SEO ee duugoobay sida walxaha muhiimka ah, isku xirka qoraallada la xidhiidha ee dhagaystayaashaadu ay u heli karaan kuwo xiiso leh oo faa'iido leh, iyo ku darida sawirro soo jiidasho leh oo dejiyo alt tags labadaba makiinadaha raadinta iyo helitaanka.
Relacionado: 13 Siyaabo Fudud oo Kor loogu Qaado SEO-ga Mareegahaaga WordPress
Dabcan, halka SEO ay muhiim u tahay wadista taraafikada blog-ka, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad diirada saarto ka-qaybgalka.
"Si aad u hubiso in nuxurkaagu yahay mid soo jiidasho leh sida uu helayo, waxay u baahan tahay inay ahaato mid qiimo leh, iyo inta badan, taasi waxay la macno tahay inaad u baahan tahay inaad qorto maaddo dheer si aad u hesho meel aad ku darto wax kasta oo aad rabto inaad ka hadasho," ayuu yidhi Hallstrom. .
"Mawduucaagu wuxuu u baahan yahay inuu fududaado in la akhriyo oo la dhex maro - kelmado fudud, weedho gaagaaban, iyo cutubyo gaagaaban," ayay ku dartay. "Hubi inaad bixiso khibrad isticmaale oo cajiib ah. Taasi waa waxa Google ka farxiya iyada oo aan loo eegin inta jeer ee ay beddesho algorithms-yada.
Relacionado: Blog-gaaga Jidkaaga Sumcad Wanaagsan: 10ka Blog ee Shirkadda ugu Fiican
Ha iloobin inaad "Tweet" ku dhejiso geeskaaga
Marka macluumaadkaagii hore-u-cusub-ka-soo-noqoshada la cusboonaysiiyay, waa waqtigii aad dhiirrigelin lahayd. "Boojooyinka hore waxay wadi karaan taraafikada cusub iyaga oo gelinaya jadwal xayeysiis ah oo la mid ah sida qoraallo cusub," Weaver ayaa yidhi. "Waxaa dheer, isku xirka wadaagga bulsheed ee horeyba u muujinaya saamiyadii laga soo bilaabo wareegii ugu dambeeyay waxay u muuqdaan kuwo ku wanaagsan booqdayaasha cusub waxayna kicin karaan saamiyo badan.
Sida aad u horumariso macluumaadka la cusboonaysiiyay waxay inta badan ku xidhan tahay kanaalka aad isticmaasho. Marka loo eego warbaahinta bulshada, sida caadiga ah waxay ku habboon tahay in loo xayeysiiyo si la mid ah sidaad u xayeysiiso waxyaabo cusub. Maaddaama dhageystayaashaaga warbaahinta bulshada ay si joogto ah isu beddelayaan, waxay u badan tahay in qaar badan oo ka mid ah kuwa raacsan aysan arkin boostada markii ugu horreysay.
Relacionado: Khiyaamooyinka Warbaahinta Bulshada ee Fudud ee Ganacsigaaga Yaryar ee Shaqeeya ee Fudud
Kuwa kale ee arkay, waxay u badan tahay inay illoobeen ama si aan caddayn u xusuustaan ​​oo ay ugu faraxsan yihiin inay mar kale ku lug yeeshaan nuxurkaas."
Liisaska iimaylka, way fiicantahay in loo diro macaamiishii aan horay u furin iimaylka kor loogu qaadayo nuxurka. Oo waxay kuxirantahay naqshadeynta goobtaada, waxaad ku riixi kartaa waxyaabaha dib loo cusbooneysiiyay bogga hore mar kale.
Siyaabo kale oo ereyga loo faafiyo? Waa kuwan talooyinka Marr:
Ku xidhid qoraaladaagii hore ee ku jiray qoraalada blogka cusub.
Gaarsii bloggers iyo kuwa saameeya kuwaas oo laga yaabo inay diyaar u yihiin inay la wadaagaan qoraalladaada dhagaystayaashooda.
Ku xidh qoraalada ku jira qoraalada martida ee aad u qorto boggaga kale.
U xayeysiiso sheekooyinka sidii "waxyaabo cusub leh!" ama "hadda la cusboonaysiiyey!" dhanka bulshada.
Abuur "ugu wanagsan" fariimaha muujinaya qoraalada hore ee la soocay.
Hadday tahay mid cusub ama mid horeba, had iyo jeer waxaad rabtaa inaad soo jiidato gaadiidka saxda ah, markaa bartilmaameed dhagaystayaashaada. "Si aad u hubiso in nuxurkaagu uu soo jiidanayo daawadayaashaada bartilmaameedka ah, waa inaad hubisaa falanqayntaada oo aad naftaada waydiiso: 'Sidee ayay dadku u helaan nuxurkayga?'" ayuu yidhi Hallstrom. "Haddii aad aragto in dad badan oo soo booqda goobta ay ka helaan macluumaadkaaga Google, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso ereyada muhiimka ah ee ay isticmaalaan. Haddii ereyada muhiimka ah aysan khusayn alaabtaada iyo adeegyadaada, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad horumariso SEO-gaaga. Ama, waxaa laga yaabaa inaad ka hesho taraafikada goobta warbaahinta bulshada sida Twitter, laakiin dhagaystayaashaadu waxay ku xiran yihiin Pinterest. Markaa, waad cusbooneysiin kartaa si aad u soo jiidato isticmaaleyaasha Pinterest, markaa wanaaji sawiradaada oo koobi u samee Pinterest.
Relacionado: Hagaha bilawga ah ee suuqgeynta xiriirka la leh
Sideed u siin kartaa Boostada Blog-gaaga Nolol shelf dheer?
Waxaa jira dhowr farsamooyin oo ganacsiga ah si aad isaga ilaaliso inaad u cusbooneysiiso macluumaadkaaga si joogto ah. "Haddii aad ka abuurto waxyaabaha weligood cagaarka ah ee ka heli-goynta, uma baahnid inaad aad uga walwasho cusboonaysiinta," Hallstrom ayaa yidhi. "Hubi waxa ku jira ka nuxurka ugu fiican ee mawduucaaga. Bal u fiirso waxa ku jira mar horeba meesha. Sideed u samayn kartaa wax ka sii wanaagsan?”
Si aad u caawiso nuxurku in uu sii dheeraado, iska ilaali qoraalada xilliyeedka ama waxa ku jira waqti gaaban oo khuseeya. "Ka fakar waxa ay dadku rabaan inay akhriyaan shan sano gudahood," Marr ayaa tiri. "Waqtiga geli si aad u abuurto waxyaabo tayo sare leh oo aad ku faani doonto sanado ka dib."
Laakiin ugu dambeyntii, Warren wuxuu kugula talinayaa inaadan isku dayin inaad ka dhigto qoraalladaada weligood.
"Inta badan, ku noqoshada waqtiga iyo hadda la socoshada waxa ku jira waxay kaa caawin doontaa inay soo baxdo. Waxaad isku dayi kartaa inaad meesha ka saarto tixraacyada dhaqanka caanka ah, taariikhaha, iyo waxyaabo kale si aad u dheereyso nolosha shelf-ka. Laakin ha is dhimin saamaynta suurtagalka ah ee nuxurkaaga maanta adiga oo rajaynaya inaad iska ilaaliso dib u soo kicinta hadhow.”
Siyaabo kale oo loo tixgeliyo waxay ka soo socotaa barta fog ee booqdaha boggaaga. "In kasta oo milkiilayaasha goobta badani ay dareemaan in cusboonaysiinta waxyaabaha ku jira blogku ay tahay dhib, waxay dhab ahaantii yeelan kartaa ROI aad u sarreeya," Weaver ayaa yidhi. "Milkiilayaasha goobta waxay u maleynayaan in nuxurku yahay war duug ah, laakiin booqdaha goobta, nuxurku waa cusub yahay."
In kasta oo ay u ekaan karto in tirtirista qoraal hore ay tahay hagaajin degdeg ah, mar kale ka fikir. "Waa muhiim inaad aad uga taxadarto markaad tirtirayso qoraaladii hore ee baloogga sababtoo ah waxay saameyn kartaa qiimeynta mashiinka raadinta," ayuu ka digay Marr.
"Waa inaad tixgelisaa inaad tirtirto qoraal hore oo blog ah haddii aysan hadda khusayn ama aan la samayn karin, boostada ayaa dhalinaysa taraafikada aad u hooseeya ama waxay leedahay jawaabo taban, adeegyadaada ama alaabtaada ayaa isbeddelay iyo boostada blogku waxay ku saabsan tahay waxyaalihii hore," ayay tiri. ayuu yidhi. "Waqtiga intiisa badan, si kastaba ha ahaatee, waxaa aad u fiican in dib loo habeeyo oo la cusboonaysiiyo waxa ku jira. Kaliya ha tirtirin qoraalada blog si aad u tirtirto. Hayso sabab wanaagsan, oo ay taageerto cilmi-baaris, si aad meesha uga saarto boostada."
Sii Blog-gaaga Hore Qaar ka mid ah Khiyaamooyinka Cusub
Haddi aad u baahan tahay caawimo helida dhagaystayaal la beegsanayo, samaynta istaraatiijiyada warbaahinta bulshada ee ku haboon, ama samaynta warside, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal uga maqnaan.
Falsafadaasi waa inay khusaysaa sida aad u wajahdo dhammaan waxa ku jira boggaaga.
"Mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee aan ku adkeyn karo waa in la isku duwo dhammaan isbeddellada boostadaada blogka oo leh istaraatiijiyad shabakadeed oo guud," Marr ayaa yidhi. "Oo markaad dib u soo celiso boostada, u samee si dhab ah oo ku habboon qorshahaaga ganacsi. Tusaale ahaan, muuqaalku waxa laga yaabaa in aanu soo jiidan dhagaystayaashaada, laakiin xog-waraysigu waxa laga yaabaa in uu si fiican u jawaabo!
Waxaan rajaynaynaa, faa'iidooyin badan oo bogag duug ah oo soo kicinaya ayaa ku qancin doona in nadiifinta khaanadda sharabaadadaadu aanay ahayn mid aad u xun ka dib.
Sida aanad u iibsanayn sharabaadyo badan oo cusub, ma aha inaad soo saarto wax cusub mar walba. "Balkeed, waxaad hubisaa in nuxurkaagu yahay kan ugu fiican," Hallstrom. "Waxay qaadanaysaa xoogaa shaqo ah xagga hore, laakiin waxaad heli doontaa abaalmarinta sannadaha soo socda."
Hadda oo aad haysatid qorshe aad ku cusboonaysiinayso macluumaadkaaga, aynu eegno adeeggaaga martigelinta.
Taladayada #1: DreamPress, kan ugu dambeeya xalinta martigelinta WordPress ee la maareeyay. Iyada oo la cusbooneysiinayo si toos ah iyo difaac adag oo amniga ah, DreamPress waxay ka qaadaa maamulka server-ka gacmahaaga si aad diiradda u saarto waxa dhabta ah ee muhiimka ah: abuurista waxyaabo aad u fiican oo socodsiiya taraafikada. Wax badan ka baro fursadahaaga maanta!
4 Qiyaasaha Suuqgeynta CMO-gaagu wuu daneeyaa
Astaamaha cusub ee Slide Over ee xoogga leh ee iOS 13 ayaa ka dhigaya mid faa'iido leh ugu dambeyntii
8 Waa in ay ku jiraan Tilmaamaha Mawduucaaga: Waxa ay u baahan yihiin qorayaashaadu inay ogaadaan
Waxa la sameeyo haddii ay si xun kuugu saamayso cusboonaysiinta algorithm ee weyn
6 Khaladaadka Hreflang Caadiga ah ee Khaladaadka Sabotaging Your International SEO
Content Suuq 698
Dib u eegista Multicollab: Google Docs-Style Comments iyo iskaashiga ee Tifaftiraha WordPress